'Umfokazi: Umnqophiso' Unikezela ngeeNdleko eziTshiphu, kwaye iNdawo eseleyo ayinanto - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa 'Umfokazi: Umnqophiso' Unikezela ngeeNdleko eziTshiphu, kwaye iNdawo eseleyo ayinanto
Umfokazi: Umnqophiso .Ikhulu lama-20 leFox
Phantse kwiminyaka engama-40 ukusukela oko uRidley Scott's sci-fi horror romp Umphambukeli, yonke into endala intsha kwakhona. Ukulandelelana, ukulandelelana kunye nokulandelelana kwee-prequels kudibanisa kwi-movie efanayo amaxesha amathandathu. Ummi: Umnqophiso, Ungeniso lwesithandathu lwekhompyuter kwi-franchise, unezinto ezifanayo ezinokuqikelelwa njengabanye: amantombazana-nye kunye namakhwenkwe kwiminqwazi yasemajukujukwini, oosomajukujuku abasemngciphekweni, iiplanethi ezinetyhefu ezibonelela izidalwa ezingaqhelekanga ezidla ukutya kumalungu azo angaphakathi de ziphume imizimba efayo kuqhushumbo lwogwebu nasemva kokuzalwa komntwana, kunye nemikhondo eyaneleyo ekugqibeleni yokuqinisekisa esinye isavenge. Iziphumo ze-CGI ziyamangalisa, abaphambukeli abatyibilikayo banamaxesha abo, igazi liphuma ngathi yirharnati, kwaye ifilimu ichithwe phantse kuyo yonke ikhredithi, kodwa akukho nto uyibonileyo ngaphambili, kwaye akukho nto , enye, uhlala ufuna ukubona kwakhona. Ubuso obungenanto, obungenanto Umphambukeli Isiseko sabalandeli asizukukhumbula iinkcukacha ezimbalwa ezilahlekileyo ezinje ngokuphuhliswa komlinganiswa, ingxoxo evakala ngathi ngabantu bokwenyani abathetha bodwa, icebo lokumanyana, okanye uhlobo lwezinto ebesizibiza ngokuba yingqondo. Sele bekho emgceni wokuthenga iDVD.
Iseti ngama-2104, kwiminyaka elishumi emva koko Prometheus , i-prequel yentsusa Umphambukeli , yashiya abasebenzi besiphekepheke sayo ukuba baguqulwe zizilo ezingaqhelekanga ezilambileyo zibe ziihambhega zabantu. Ukungakuphazamisi ngakumbi, Ummi: Umnqophiso, I-sequel eya kwi-prequel, iqala inqanawa yekoloni ebizwa ngokuba ngumnqophiso oqulethe imibungu emininzi yovavanyo lwe-tube kunye ne-15 ye-galaxy yabahloli, abathi ngesizathu esithile ndiqinisekile ukuba akuvumelekanga kwinkqubo yokwenyani yendawo, batshatile omnye komnye. Umsebenzi wabo: ukufumana iindawo ezintsha ezifanelekileyo ukumisela iikholoni ezintsha zohlobo oludlulileyo olubizwa ngokuba ngabantu. Ikhompyuter ebizwa ngokuba nguMama ibhengeza isaqhwithi esibi, abasebenzi bavuswa kwi-hypers sleep kwiminyaka esixhenxe kungekudala, kwaye wonke umntu uphela kwiplanethi enobundlobongela ebizwa ngokuba yi-Origae-6, apho i-Prometheus yanyamalala, idlalwa yiNew Zealand. Ngokungekho ngqiqweni ukuzula ujikeleze ujonge imiqondiso yobomi bomntu, abasebenzi baphefumla amasuntswana othuli aguquka abe ziincukuthu ezibuhlungu ezithi emva koko zingene ngeendlebe kunye nemingxunya yesono kwaye zikhule zibe yinto eyoyikisayo, yokutya inyama, yomxhuzulane. izinto zabantu kwifilimu ngaphambi kokuba uvule iiJuju zakho.
Ngenceba, uJames Franco sele eswelekile nje ukuba kuvulwe iikhredithi, eshiya uBilly Crudup ethatha indawo. Amalungu amabini abasebenzi athatha intsholongwane ebulalayo ayibuyisele kwinqanawa yomama ebajika babe yimikhosi yabantu kwizidalwa ezityhafileyo ezinamazinyo afana nocingo lweepikethi ezizinqumlayo, nganye nganye. Ukusuka apho, kuyonwabisa umzuzu. Ubundlobongela bubukrakra kakhulu kwaye abubonakali. Ukongamela ukubulawa kwabantu, kwakhona, nguMichael Fassbender njengoDavid, irobhothi ekhaba iesile Isithembiso, kodwa ngeli xesha, kuMnqophiso, ubizwa ngokuba nguWalter. Ngokuqinisekileyo, uWalter ubalekela kuDavid, ojika waba liwele lakhe. Ngoku sinokuphambuka kwesiqwenga esinokuthiwa kuphela yirobhothi elungileyo, irobhothi embi. Andizukutyhila enye inkcukacha, ukuba unomdla kubaphangi, kodwa ndifumene isiphelo esothusayo ukuba ndilapha ukukuxelela-ukuba awuyazi ukuba yeyiphi irobhothi esendleleni ebuyela eMhlabeni kwi isiphelo, awubonanga iimovie ezininzi zikaRidley Scott. Abadlali bayasokola ukubonakala bengqwabalala kwaye kufanelekile kwisenzo, kodwa bayazi xa bekhothwa.
Inzima, inkulu, inengxolo kwaye ayinakuthetha, Umfokazi: Umnqophiso inokuzonwabisa abalandeli, kodwa ayenzi nto ukuphucula uthotho. Abaphambukeli bangabaphambukeli, kwaye ngokoluvo lwam, kungcono ukubashiya.
ICybertruck kaTesla ifumana i-Preorder enkulu-kodwa enye yeenkcukacha ezinkulu ihlala ingacacanga
I-Iconic yaseHarrison Ford 'Indiana Jones' Hat iya kuThengiswa ngoJuni
Umyalezo wezopolitiko kaSamuel L. Jackson oya eMelika: 'Vusa iF-K Phezulu!' (Ividiyo)
Ngaba i-delta 8 ikunyusela phezulu
umthetho kunye nocwangco: ukophulwa kwamatyala awodwa
I-nwa rock kunye neholo yokuqengqeleka yodumo 2016
apha ngoku sarah jessica parker
Iharry's blades vs dollar shave club
westinghouse indlu yonke lokucoca ulwelo amanzi